CASTELLO DI ZANTE - I-Airbnb
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguΦωτεινη
Inqaba ngokungathandabuzekiyo yeyona ndawo ifanelekileyo yokubalekela ikwilali entle yasentabeni ebizwa ngokuba yiAgalas kunxweme olusentshona lweZakynthos. Lo mmandla mhle wohlulwa ngenxa yobuhle bayo bendalo obumangalisayo. Inqaba inika iimbono ezintle zoLwandle lwase-Ionian kunye namahlathi epayini angamanyathelo ambalwa ukusuka kwindlu.
Inqaba inokuhlala abantu aba-2 kwaye inikezela ngegumbi lokulala eli-1 elinebhedi ephindwe kabini, ikhitshi elixhotyiswe kunye negumbi lokuhlambela eli-1 elineshawa. Iindwendwe ziya kufumana zonke izibonelelo eziyimfuneko ezifana ne-air conditioning, ukufikelela kwi-intanethi engenazingcingo, i-ayina kunye nebhodi yoku-ayina, umenzi wekofu, i-TV yesikrini esicaba.
Inqaba iseZakinthos, eGrisi.
Le nqaba ikwilali entle yaseAgalas. Ilali intywiliselwe kuluhlaza kwaye ikufutshane neendawo zokuchithela iiholide zokhenketho. Inxalenye esentshona yeZakynthos ibonelela abatyeleli ngeendawo ezinomtsalane ezinombono ongalibalekiyo. Le lali yaziwa ngokuba ngumqolomba weDamian, umqolomba onemigangatho emibini eneendawo zokungena ezi-2, i-stalactites kunye ne-stalagmites. Ungaphuthelwa ukutyelela amaqula aseVenetian aseAdroni asetyenziselwa ukuqokelela amanzi emvula.
Umbuki zindwendwe ngu- Φωτεινη
Sifumaneka ngayo nantoni na oyifunayo ngexesha lakho leholide.
Inombolo yomthetho: 00000677730